सेतो बाघ : पर्दामा दृश्य चल्छ, तर चलचित्र लाग्दैन ! - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २३ कार्तिक २०७१, आईतवार २०:२६ |
रकम तिरेर टिकट काटेर दर्शक जब कुनै चलचित्र हेर्न हलमा छिर्छन तब उनीहरुको एउटै चाहना हुन्छ–त्यो हो पूर्ण रुपमा मनोरन्जन पाउने । चलचित्रको सफलता र असफलता पनि दर्शकहरुले उक्त चलचित्रबाट कतिको मनोरञ्जन लिन सके,त्यसैबाट मापन गरिन्छ क्यार ।
प्रसँग सेतो बाघ चलचित्रको । सेतो बाघ एउटा ऐतिहासिक कथा बोकेको सफल उपन्यास हो । तर कुनै कथा र कृति लेख्य साहित्यमा मात्रै राम्रो हुनेरहेछ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो त्यहि कृतिमा आधारित चलचित्र सेतो बाघ । किनभने शनिवार मेलबर्नमा प्रिमियर गरिएको सेतो बाघ चलचित्र हेर्दा चलचित्रको कुनै पक्षले अधिकाँश दर्शकलाई छोएन । कथा वाचनको कुन शैली प्रयोग गरिएको हो, त्यसको मेसो पाउँन मुस्किल छ । लाग्छ निर्देशक र पटकथाकार आफैं कथावाचनमा अल्मलिएका छन् । चलचित्रलाई सम्पादन पक्षले पनि चुस्त र दुरुस्त बनाइदिन्छ तर सेतोबाघको सम्पादन पक्ष पनि निकै फितलो छ । यसले पनि चलचित्रलाई अझ कमजोर बनाइदिएको छ । फलस्वरुप चलचित्रको अन्त्यतिरको केहि दृश्य बाहेक हरेक दृश्यमा दर्शकले बोर फिल गर्छन् र, गोजीबाट मोबाइल झिकी फेसबुकमा रमाउन थाल्छन् ।
त्यसो त दर्शकलाई मनोरञ्नन दिने परम्परागत मसला अर्थात गीत पनि मिसाइएको छ सेतोबाघमा । तर चलचित्रमा गीत हाल्नैपर्छ भन्ने मान्यताले मात्र एक ठाउँमा जबर्जस्ती गीत हालिएको दर्शकले थाहा पाइहाल्छन् ।
सेतो बाघलाई चलचित्र भन्नुभन्दा पनि बरु वृत्तचित्र भन्दा बेस होला । किनभने यसको वाचनशैली र प्रस्तुति वृत्तचित्रको भन्दा अलिकति पनि माथि उठ्न सकेको छैन । वसन्ती चलचित्रमा रहेको गौरी मल्लको दृश्यलाई यस चलचित्रमा यसरी समेटिएको छ कि सबै दर्शक फिल्म भित्रको अर्को झुर फिल्म देखेर अल्मलिन्छ्न् । प्रिमियर गर्न हतार भएर सम्पादन गर्दागर्दैको चलचित्र प्रदर्शन गरिएको हो कि भन्ने अनुमान गर्दै दर्शक हलबाट बाहिरिन्छन् ।
राम्रो चलचित्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ–यसमा कुनै सन्देहा छैन तर नराम्रो चलचित्रलाई निरुत्साहित पनि गर्नुपर्छ । सेतो बाघ उपन्यासको जुन ख्याति र ओजन छ ,त्योसँग फिटिक्कै मेल खाँदैन ख्यातिप्राप्त अभिनेता तथा निर्देशक नीर शाहको निर्देशनमा बनेको चलचित्र सेतो बाघ । उनी जस्तो अब्बल र प्राज्ञिक व्यक्तित्वले सेतो बाघमा आएर आफ्नो क्षमता र योग्यतालाई नै किन यसरी दाउमा राखे ? उनै जानून् । तर उनको यसपटकको च्याँखे थपाई उपलब्धीविहीन भएकोमा शायद उनी पनि स्पष्ट भैसकेका होलान् ।
Previousकृषि क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्छ : कोईराला
Nextअब्बल चलचित्र झोला फेरि देखाइदै
तीतोसत्यका लाजाराम उर्फ कलाकार आरपी भट्टराईको निधन
२४ मंसिर २०७३, शुक्रबार ०४:३७
शाहरुख, सलमान र आमिर खान मध्ये को पावरफुल..?
१५ कार्तिक २०७१, शनिबार १३:११